नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – Nep Stok
शनिबार , असार ११, २०७९
नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ को-रोनाको यस्तो लक्षण देखिनासाथ सत’र्क हुनुहोला, थाहै नदिइ ज्या’ न लान सक्छ, सबैले जान्नै पर्ने २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस
पुष १२, २०७८ सोमबार 473
काठमाडौँ । यदि यी लक्षण देखिएमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला नत्र ज्या`नै जान सक्छ ! यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा र बान्ता हुने,एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केहि लक्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला ।
यसपटक परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबै संक्रमित हुने अवस्था छ त्यसैले कुनै लक्षण देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुहोला । संक्रमणको शंका लागेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । सहेर वा हेरौं भनेर अलमल नगर्नुहोला। जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो, त्यति छिटो उपचार पाउने अवस्था हुन्छ।
१) पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट ( भिटामिन वा इम्युन बुस्टर ) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो को- भिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको को- भिड अस्पतालको फि-भर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाइंलाई परीक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जांच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । यदि तपाइंको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाको लागि सल्लाह दिनुहुनेछ । उहाँहरुको सल्लाह अक्षरस पालना गर्नुहोला ।
२) लामो समय ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, खाना खान गाह्रो भयो वा अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा तल भइरह्यो भने घरमा नबस्नुहोला । यो अवस्थामा तपाईंलाई छातीमा संक्रमण भएको बुझ्न सकिन्छ । जति छिटो अस्पताल पुग्यो त्यति छिटो भर्ना हुन् नपर्ने एबम सजिलोसंग निको हुने अवस्था हुन्छ ।
३) गतसाल संक्रमण भएका वा यो साल खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण हुनसक्छ । प्रजाति फरक भएकोले गाह्रो हुन सक्छ । मैले खोप लगाएको छु वा पोहोरको एन्टिबोडीले काम गर्छ भनेर लापरबाही नगर्नुहोला । अप्ठ्यारो भए तुरुन्त अस्पताल जानुहोला । ४) बालबालिका तथा युवालाई केहि हुँदैन भनेर घरमा नबस्नुहोला । यसपटक बालबालिका र युवाको संक्रमण दर, गम्भीर हुने दर तथा मृ- त्युदर गतसालको भन्दा धेरै छ ।
५) अस्पताल जाने बेलासम्म घोप्टो परेर सुत्नु भयो भने अक्सिजनको स्तर केहि बढ्दछ त्यसैले पेटको बलमा घोप्टो परेर सुत्नुहोला । ६) अस्पताल प्याक छन् भनेर नआत्तिनुहोला । अस्पताल जाँदैमा सबै भर्ना हुनु पर्दैन । प्याक भएका अस्पतालले अस्पताल बाहिर समेत अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेका छन् ।
७) चिकित्सकको सल्लाह बिना आफै अक्सिजन लगाएर घरमा नबस्नुहोला । अक्सिजन उपचार हैन । निमोनिया वा अन्य छातीको संक्रमणको औषधि चलाउँदै अक्सिजन लगाउनुपर्छ । अक्सिजनको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र थपघट गर्नुपर्छ ।
८) औषधि उपचार प्रत्येक व्यक्तिको फरक हुनसक्छ । एकजनालाई निको भएको औषधिले अर्को व्यक्तिलाई निको नहुन सक्छ । तसर्थ स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका व्यक्तिले सिफारिस गरेको औषधि सेवन नगर्नुहोला । कुनै पनि औषधिले को- रोना च्वाट्ट निको हुने वा लाग्न नदिने कुरा गर्छ भने त्यो गलत हो ।
९) प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि जथाभावी आयुर्बेद औषधि नखानुहोला । सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारस अनुसार मात्र आयुर्बेद औषधि सेवन गर्नुहोला । आयुर्बेद औषधिले को- भिड निको हुँदैन । तपाइंको स्टामिना बढाउँछ । यस्तो बेला सबै चिकित्सा पद्दतिको एकीकृत उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
१०) यसपटकको संक्रमणले निकै छिटो फोक्सोमा असर गर्ने किसिमको छ । ४ – ६ घण्टामा निकै बढी असर गर्न सक्छ । तसर्थ भोलि अस्पताल जाउँला भनेर नबस्नुहोला । निको भएका संक्रमितका कुरा सुन्नुहोला । ११) अस्पतालमा गम्भीर बिरामीप्रति चिकित्सकको ध्यान बढी हुन्छ तसर्थ नआत्तिनुहोला ।
१२) कुनैपनि चिकित्सकले औषधि चलाएको बेला पनि भित्रभित्रै असर हुनसक्छ । यो भाइरल संक्रमण भएको हुँदा एन्टिबायोटिकको भर पर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा एकपटक छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गर्नु सुरक्षित हुन्छ । १३) उपचार पश्चात पिसिआर नेगेटिभ आएपनि को- भिडले तपाइंका बिभिन्न अंगमा असर गरेको हुनसक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यसको पनि उपचार गरेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
( सरकारले जारी गरेका सुचना, सतर्कता तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाबाट हामी संक्रमणबाट बच्नेछौँ । कृपया पटक्कै लापरबाही नगर्नुहोला । हामीले आफु, परिवार तथा समाजलाई संक्रमण हुन् नदिनको लागि सतर्क बनौं । सतर्क भएमा हामी अस्पताल जानु पर्दैन । ) डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको फेसबुक वाल बाट
काेराे-ना भा- ईरस ( काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ अनिबार्य रुप मा माक्स को प्रयोग गरौं साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।
Prevकाठमाडौंमा घर हुनेहरुका लागि सरकारले लगायो नयाँ नियम, अब यो कार्य गरे कडा कारवाही हुने
Nextप्रहरी भ्यानको ठ क्क र वाट ब्यवसायीको मृत्यु, सर्लाहीमा त’नाव
काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति १२ बजे देखि सरकारले लगाएका यी १८ नियम, उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध कडा कारवाही हुने (बिज्ञप्ति सहित)
ड्राइभर बिरामी परेपछि गाडी साहु आफैंले हाँकेका थिए संखुवासभामा दु`र्घट`ना भएको बस
घट्यो जग्गाको भाउ : हेर्नुहोस् कति सस्तोमा पाइन्छ ?
सिंगापुरले माग्यो ६ वर्षपछि नेपाली कामदार, हेर्नुस् कति छ तलब ?
आईतबार सार्वजनिक बिदा ! (5179)
एउटी आमाको यो कारुणिक दृश्य : मृत्यु भएकी छोरीलाई काखमा राखेर … (4508)
मोरङमा डेढ वर्षको बच्चा ‘चोरेर’ ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या (4295)
अब देशभरी पेट्रोल देशभरी नपाइने?भर्खरै आयो यस्तो खबर। (3956)
पेट्रोलको मूल्य फेरी सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै बढ्यो : हेर्नुहोस (3609)
समिक्षा अधिकारीको पनि अडियो बाहिरियो, त्यो दिन यस्तोसम्म भएको रहेछ : हेर्नुहोस भिडियो सहित (2841)